IPlasma 5.18.5, ukukhutshwa kwesondlo kwangoko kuthotho | Ubunlog
IPlasma 5.18.5, ukukhutshwa kwangoko kulondolozo kuthotho kuye kwafika ukubopha ukugqiba ukubumba imeko-bume
Njengoko kucwangcisiwe, kuyinyani ngexesha elifanelekileyo, iprojekthi ye KDE isungule IPlasma 5.18.5. Olu luguqulelo lokugqibela lokugcina kolu ngcelele, olo balubandakanyayo kwi-Kubuntu 20.04 LTS, nangona Inguqulelo efakwe kwiFocal Fossa ayizukuhlaziywa kule nkqubo yokusebenza njengoko siza kuchaza ekupheleni kweli nqaku. Njengokukhutshwa kwesondlo, akukho zixhobo zitsha zibandakanyiweyo, ngaphaya kokulungiswa kwe-bug kunye nokusebenza kunye nokuphuculwa konxibelelwano.
Njengamaxesha onke kolo khululo, i-KDE ipapashe amanqaku aliqela kolu khululo. Kwi omnye wazo Isixelela malunga nokufumaneka kwePlasma 5.18.5, ngelixa ikwindawo ebanzi ngakumbi basinika yona uluhlu olupheleleyo lweendaba, 66 utshintsho ngeli xesha. Kweli nqaku siza kubeka uluhlu olungekho semthethweni, kodwa olo balukhankanyileyo kwezi veki zidlulileyo kwaye lubandakanya neendaba ezibalaseleyo kangangokuba babenesidingo sokwabelana nabo sonke phambi kokumiselwa ngokusesikweni.
1 Iiplasma 5.18.5 Iimbalasane
2 Kungekudala kwi-Discover
Iiplasma 5.18.5 Iimbalasane
Ukuphinda ubuyekeze ii icon kwi icon yeeKhetho zeNkqubo kwiphepha ngoku kukhokelela kubungakanani be icon kuyo yonke isoftware ye KDE itshintshwe kwangoko, kunokuba iphinde iqaliswe.
Ifolda yokujonga incoko yababini ibanzi ngokwaneleyo ukuba ibonise ngasemva kweekholamu zeempawu.
Ukukhangela kwi-Kickoff App Launcher kusebenza kwakhona xa isikhombisi sibekwe phantsi kwebar ye-tab.
Emva kokufaka umxholo wehlabathi, isitayile sePlasma esifanelekileyo, isitayile sewijethi, kunye nescreen sasekhaya ngoku zikhethwe kumaphepha abo.
Iifayile zekhasi ezikhethiweyo zeNkqubo yeeNdlela eziFutshane zefestile ngoku zinobungakanani obungagqibekanga besimo xa zivulwa ngokuzimeleyo kwiwindow yayo.
Kulungiswe ibug eyenza ukuba izaziso zenkqubo zibonakale zithulisiwe ngokungagqibekanga kwaye zingalawuleki kwiiNkqubo ezikhethwayo ngaphandle kokuqala uhlengahlengise ivolumu kwakanye usebenzisa i-app yeqela lesithathu lePavucontrol.
Ukungena kwiWayland akusavimba i-KWin kwaye kukushiya unescreen esimnyama.
IiPlasma Vaults azisekho ukuxhoma xa urhoxisa incoko yencoko emva kokuba ungenakunyusa igumbi kuba indawo yentaba ingabinanto.
Ukulungiswa kweengozi ezahlukeneyo kunye nemicimbi ye-UI kwi-DrKonqi yomsasazi wewindows kwiWayland.
Amangenelo oMphathi woMsebenzi wee icon ezicinezelweyo akasayi kutsiba xa kusungulwa ukuba kukho naziphi na ii -apps ezikhethiweyo ezivela kwifayile yoqwalaselo esebenzisa iskimu esikhethiweyo: // URL.
IPlasma 5.18.5 sele ikhona, kodwa ngexesha lokubhalwa kuphela kwifom yekhowudi. Kungekudala kuza kuza ukufumanisa kuzo zonke iinkqubo ezisebenzayo ezinazo yongeze indawo yokugcina ekhethekileyo efana neeReports isuka kwi KDE okanye kwigosa elisemthethweni le KDE.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Iidesika » KDE » IPlasma 5.18.5, ukukhutshwa kwangoko kulondolozo kuthotho kuye kwafika ukubopha ukugqiba ukubumba imeko-bume
I-Inkscape 1.0 iza ujongano olutsha, izixhobo, uphuculo kunye nokunye
IFirefox 76 ngoku iyafumaneka kunye nokuphuculwa kweLockwise, iPIP yayo kunye neWebRender eyandisiweyo